Fitaovana British Aircraft Corporation BAC 1-11 FS2004 - Rikoooo
Downloads 14 387
Fiaramanidina Bac 111 komersial. Gaga amin'ny kalitao. Misokatra ny varavarana aloha sy aoriana. safidin'ny repoblika marobe. Modely sidina tonga lafatra. Kaba an-tsary manakaiky ny zava-misy. Feo hatsaràn'ny "reverse". Lisitry ny lisitra famerenana alohan'ny alohan'ny fitsidihana sy ny fomba fanaraha-maso amin'ny sidina. Fiaramanidina izay tsy tokony hotsidihinao FS9! Tsy Compatibe FSX.
Ny British Aircraft Corporation 1-11 (na BAC 1-11) dia fihetsiketsehana an-tsambo britanika, 1960 sy 1970. Ny Designed by Hunting Aircraft dia novolavolaina sy novokarin'ny British Aircraft Corporation taorian'ny niverenan'ireo mpamokatra britanika lehibe tao 1960.
Ny BAC 1-11 dia natao hanoloana ny Vickers Viscount. Izy no fiaramanidina fitaterana fohy faharoa, ny voalohany dia ny Sud Aviation Caravelle. Noho ny fidirana amin'ny serivisy taty aoriana, ny BAC 1-11 dia tombony amin'ny fitaovana maoderina kokoa sy ny traikefa lehibe kokoa amin'ny mpikatroka. Izany no nahatonga azy ho nalaza tamin'ny fanombohana, ny antsasaky ny varotra ao Etazonia. Ny BAC 1-11 dia mpiloka britanika tena nahomby, ary notohanana nanompo hatramin'ny 1990, rehefa nesorina izy noho ny fanakanana feo.